Ndị isi ntọala ahịa azụmaahịa bụ na ị nwere ike nyochaa ma gụọ usoro nke atụmanya dabere na myiri na ndị ahịa gị. Ọ bụghị atụmatụ ọhụrụ; anyị ejirila data mee ihe ruo iri afọ ole na ole ugbu a iji mee nke a. Otú ọ dị, usoro ahụ na-agwụ ike. Anyị na-eji wepụ, mgbanwe na ibu (ETL) ngwaọrụ iji wepu data sitere na isi mmalite iji wuo akụ na-etiti. Nke ahụ nwere ike were izu iji mezuo, ajụjụ ndị na-aga n'ihu nwere ike were ọnwa iji zụlite ma nwalee.
Ngwa ngwa ngwa ugbu a na ngwa ọrụ na-aghọwanye nke ziri ezi, algọridim na-akawanye mma, nsonaazụ ya na akpaghị aka ma na-emeziwanye. '' Akụkọ Per Everstring, Ozi 2015 State nke Predictive Marketing Survey Report, nrutu nke ihe ato emeela ka odi ngwa ngwa nke ahia ahia:
Amụma ịzụ ahịa ịkọ amụma ka bụ nwata. Ihe dị ka 25% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha nwere CRM bụ isi, ihe karịrị 50% kwuru na ha etinyela ego na akpaaka ahịa ma ọ bụ na-achọsi ngwọta ike. Naanị 10% nke ndị zaghachiri kwuru na ha na-ejikọta CRM na akpaaka na teknụzụ ndị ọzọ iji mee ka nsonaazụ azụmaahịa pụta. Anyị nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-aga!
Ọ bụghị sayensị zuru oke, mana ọ nwere ikike ịbawanye ntụkwasị obi, njikọ aka, na ntụgharị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere n'ọdịnihu dị nso. Nke ahụ na-aga maka nsonaazụ mgbasa ozi ahịa yana nsonye na ndị ahịa gị. Ihe na-akpali akpali. Matt Heinz, Onye isi ala, Heinz Marketing.